Ukuhlola uhlobo lweNkolo kunye neenkolelo zeNkolo
Iyintoni Inkolo? Ingxaki Yokuchaza Inkolo:
Uncwadi lwezemfundo luzaliswe imizamo yokuchaza ukuba yintoni inkolo kwaye ezininzi zale mizamo ayinakunceda. Iinkcazo zonqulo zivame ukuxhatshazwa kwesinye seengxaki ezimbini: zincinci kwaye zingabandakanyi iinkqubo ezininzi zonkolelo abantu abaninzi abaya kuvuma ngazo zonqulo, okanye ziyinto engacacanga kwaye ingabonakaliyo, ekhokelela ekugqibeleni ukuba kukho nayiphi na into ngokwenene unqulo.
Inkcazo yeNkolo: Inkolo ichazwe njani?
Uninzi lweengcali kunye nemfundo yokuzama ukuchaza okanye ukuchaza unqulo lunokufakwa kwisinye sezidimbini ezimbini: ukusebenza okanye okubalulekileyo. Ngamanye imele imbono ecacileyo ngokubhekiselele kumsebenzi wenkolo, kodwa izichazi-magama, izazi-mfundiso kunye nabaphengululi abahlukahlukeneyo baye baphikisana neendlela zabo malunga nendlela inkolo ifanele ichazwe ngayo.
Inkolo ngokumelene noTyism: Ngaba inkolo ichazwe ngokukholelwa kuThixo?
Ingaba inkolo kunye nobuqabane buyimpumelelo into efanayo, njengokuba zonke iinkolo ziyingxenye yesonto kunye nayo yonke into inokholo? Ngenxa yezinye iingcamango eziphosakeleyo, abantu abaninzi bayayiphendula loo mbuzo ngokuqinisekileyo. Akuqhelekanga nakubantu abangakholelwa kuThixo ukuba bacinge ukuba inkolo kunye ne-theism zilingana. Funda ngokugqithisileyo...
Inkolo nxamnye Nenkolo: Ukuba Nento Enokwenkolo, ingabe Inkolo?
Imigaqo yenkolo kunye nenkolo ngokucacileyo ivela kwiingcambu ezifanayo, eziqhelekileyo zikhokelela ekugqibeleni ukuba nazo zibhekisela kwizinto ezifanayo: enye njengesibizo kunye nesinye isichazi.
Kodwa mhlawumbi oko akusoloko kuyinyaniso-mhlawumbi isichazi senkolo sinokusetyenziswa ngokubanzi kunqulo lobubi. Funda ngokugqithisileyo...
Inkolo ngokuchasene nefilosofi: Yintoni eyahlukileyo?
Ngaba unqulo luhlobo nje lwefilosofi? Ngaba ifilosofi yinkolo? Kubonakala kubakho ukudideka ngamanye amaxesha malunga nokuba unqulo kunye nefilosofi kufuneka zihluke njani komnye nomnye - le mpikiswano ayilungelekanga kuba kukho ukufana okunamandla phakathi kwababini.
Inkolo Nokomoya: Ngaba Unqulo Lulungiswe Ngokomoya?
Enye ingcamango eyaziwayo kukuba kukho ukuhlula phakathi kweendlela ezimbini ezahlukeneyo ezinxulumene noThixo okanye oyingcwele: unqulo kunye nokomoya . Inkolo ichaza intlalontle, uluntu kunye neendlela ezihlelwe ngayo abantu abachazela ubungcwele kunye noThixo xa ulwalamano lubonisa ubudlelwane obunjalo xa bevela ngasese, ngokwabo, nangendlela eclectic. Funda ngokugqithisileyo...
Inkolo ngokukholelwa kwiinkolelo-ze: Ngaba Unqulo Lulungiswe Ngokwenyaniso?
Ngaba kukho uxhulumaniso lwangempela phakathi kweenkolelo kunye nenkolelo-ze? Abanye, abalandeli abathile beenkolelo zonqulo ezahlukeneyo, baya kuthi kaninzi ukuba ezi zimbini zizintlobo ezahlukeneyo zeenkolelo. Kodwa abo bemi ngaphandle kwenkolo, nangona kunjalo, baya kuqaphela ukufana okubaluleke kakhulu kunye nokubaluleka okubaluleke kakhulu okubhekiselele. Funda ngokugqithisileyo...
Inkolo ngokubhekiselele kwi-Paranormal: Ngaba iindawo ezizimeleyo kunye neenkolelo zenkolo zinjalo?
Ngaba kukho uxhulumaniso lwangempela phakathi kwenkolo nenkolelo kwi-paranormal? Abanye, ngokukodwa abaxhasi beenkolelo zonqulo ezahlukeneyo, baya kuthi kaninzi ukuba iintlobo ezimbini zeenkolelo ezihlukeneyo. Kodwa abo bahlala ngaphandle kwenkonzo, nangona kunjalo, baya kuqaphela ukufana okubaluleke kakhulu okuqwalasela ngakumbi.
Inkolo Nesizathu: Ngaba Unqulo Lungenangqondo?
Ngaba unqulo kunye nesizathu asihambisani? Andiyicingi njalo, kodwa loo nto ayisoloko yimeko elula yokuyixhasa. Kubonakala kunqabile ukuba inkolo ikhuthaze isizathu okanye ixabise ingqiqo ngelixa kwangexesha elifanayo ininzi inkolo ukuba idumise iimvakalelo eziphezulu kunye nokholo, izinto ezimbini ezivame ukuvimbela ukuqiqa kakuhle.
Ngaba Unqulo Luyimfuneko Yokuziphatha, iNdemokhrasi Nobulungisa?
Esinye isikhalazo esiqhelekileyo malunga nokuxhaswa kwezenkolo kukuba inkolo kunye nenkolelo kuThixo kuyimfuneko yokuziphatha, ubulungisa kunye noluntu lwentando yesininzi. Isiseko esisezantsi apha kukuba ixabiso kuphela ekugqibeleni yimiba ehamba phambili , kwaye ezo zixabiso zingaqondwa kuphela kwaye ziqondwe kwizithethe zonqulo kunye nokuxhamla noThixo.
Abantu Iqoqo leBingo
ESL Ukunikezelwa kweRubriki
Ikhalenda kaNovemba yezinto eziBalulekileyo eziBalulekileyo kunye neZokuzalwa
5 Iinkcukacha zomSebenzi oLutsha osebenzayo